म सारै दुःख गरेर पाथिभरा देवीको दर्शन गर्न गएँ | tour Khabar
म सारै दुःख गरेर पाथिभरा देवीको दर्शन गर्न गएँ
सुनिल चौधरी एक युवा व्यवसायी हुन् । इलाममा जन्मिएका उनी अहिले आफ्नो व्यवसायको शिलशिलामा झापामा छन् । आफ्नो व्यवसायबाट सन्तुष्ट रहेको बताउने चौधरीले अब आफ्नो जन्मभूमि इलामका लागि काम गर्ने बताएका छन् । इलाम पर्यटकीय सम्भावना भएको जिल्ला भएको बताउँदै चौधरीले कन्याम, अन्तु, माइपोखरी, सन्दकपुरलगायतका क्षेत्रमा पर्यटक पुर्याउन पहल गर्ने बताएका छन् ।
धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य ताप्लेजुङको पाथिभरा देवी दर्शन गरेपछि आफ्नो व्यवसाय फस्टाएको विश्वास गर्ने उनले पाथिभरा जानेका लागि दसैंको फूलपातीदेखि तीन दिन हल्का सवारीमा निःशुल्क इन्धन हालिदिने तथा झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलबाट ताप्लेजुङसम्म हेलिकोप्टरको सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् । यही विषयमा चौधरीसँग टुर खबरले गरेको कुराकानीः
झापादेखि ताप्लेजुङसम्म हेलिकोप्टर सेवा र हल्का सवारीलाई निःशुल्क इन्धन दिन्छु भन्नुभएको रहेछ, के प्रयोजनका लागि हो ?
– यो सेवा सँधैका लागि भनेर होइन । मैले मेची अञ्चलमा रहेको व्यक्तिलाई पूर्वको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथिभरा माताको दर्शन गर्ने वातावरण बनाउन यो काम गरेको हो । नाफा प्रयोजनका लागि होइन । आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति जो पाथिभरा जाने रहर गर्छ उसका लागि मन्दिर दर्शन गराउन लैजाने हलुवका सवारीलाई निःशुल्क इन्धन उपलब्ध गराउने र पैसा भएपनि विभिन्न कठिनाईका कारण गाडीमा जान नसक्नेहरुका लागि हेलिकोप्टरको सेवा उपलब्ध गराउने जमर्को गरेको छु ।
यो सेवा कहिलेदेखि ?
– मैले बुझे अनुसार पाथिभरा माताको सबैभन्दा बढी शक्ति हुने समय भनेको दसैंको बेला हो । त्यही भएर सप्तमीको दिन अर्थात फूलपातीदेखि दसमीको दिनसम्म पाथिभरा मन्दिर जाने हल्का सवारीका लागि इन्धन दिने र सोही समयमा भद्रपुर विमानस्थलबाट ताप्लेजुङसम्म हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । हेलिकोप्टरका लागि भने आउन जानको भाडा ५० हजार रुपैयाँ हो । भद्रपुर विमानस्थलबाट हेलिकोप्टर उड्छ ।
इन्धन कसरी दिनुहुन्छ ? तपाईले इन्धन दिने सवारीको मापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
– म अहिले झापामा काम गरिरहेको छु । झापामा मेरो अफिस अघि ताप्लेजुङ जाने गाडीलाई म कुपन दिन्छु । कुपन दिँदा पाथिभरा दर्शनका लागि हो कि होइन ‘कन्र्फम’ गर्छु । यात्रुलाई सोध्छु । अनि इलामको पेट्रोलपम्पमा पुगेपछि इन्धन हाल्ने व्यवस्था गरेको छु ।
पाथिभरा जानेका लागि मात्र हो यो सेवा ?
– हजुर । म पहिला सारै दुःख गरेर पाथिभरा देवीको दर्शन गर्न गएको थिएँ । सब्जी किन्ने पैसा पनि नभएका बेला मैले पाथिभरा देवीको दर्शन गरी इलाममा आएर पाथिभरा कै नामबाट ‘इलामे पाथिभरा इन्टरप्राइजेज’ नाम गरेको पेट्रोलपम्प खोलेको थिएँ । त्यसपछि व्यवसायमा पछाडि फर्कनुपर्ने अवस्था आएन । त्यही भएर पनि मैलेजस्तै दुःख पाएर देवीको दर्शन गर्न नसक्ने अवस्थामा मान्छेलाई ध्यानमा राखेर यो काम गरेको हो । यसले मेरो जन्मभूमिको पर्यटन प्रबद्र्धन पनि हुन्छ भन्ने छ ।
पर्यटन प्रबद्र्धन चाँही कसरी ?
– झापाबाट ताप्लेजुङ जाने गाडी इलाम नै भएर जाने हो । उनीहरुले बाटोमा हाम्रो सुन्दर इलाम देखेर घर आएपछि वर्णन गर्छन । त्यसपछि त्यहाँ पर्यटक जान्छन् । त्यस्तै हवाईजहाज सेवाबाट पनि इलामका राम्रा गन्तव्यहरु कन्याम, श्रीअन्तु, माइपोखरी, सन्दकपुरलगायतका ठाउँ देखिने भएकाले त्यो ठाउँलाई फेरि हेर्न जाने पर्यटकको संख्या बढ्छ ।
तपाई त व्यवसायी यो कामबाट तपाईंलाई के फाइदा हुन्छ ?
– सबैकाम नाफाघाटा जोडेर गर्न थालेमा जीवन नै चल्दैन । यो काम मेरो आत्म सन्तुष्टिका लागि हो । मेरो लागि मैले कमाईसके । मेरा छोरीहरु छन् उनीहरुलाई राम्ररी पठाएपछि उनीहरु आफैं सक्षम बन्छन् । अब मेरो जन्मभूमिलाई राम्रो बनाउन, त्यहाँका मानिसहरुलाई समृद्ध बनाउन म काम गर्छु । इलामेलाई समृद्ध बनाउन पर्यटन व्यवसायलाई नै मजबुद बनाउनुपर्छ ।